Dad hor leh oo ku sugan Magaalada Muqdisho oo laga helay COVID-19 – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Fedaraalka Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay xaaladahii ugu danbeeyay Cudurka COVID 19 ee Soomaaliya.
Wasaaradda ayaa sheegtay in barataanadii ugu danbeeyay ee la sameeyay shalay laga helay 28 ruux oo ku sugan Muqdisho iyo Hirshabeelle, islamarkaana ay sare u sii kacayaan kiisaska cudurka Karoonaha.
Drs. Fawziya Abiikar Nuur, Wasiirka wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya ayaa sheegt in 12-kii February 2021: xanuunkan laga baaray dad gaaraya 628 COVID-19, waxana Laga Helay 62, oo ku sugan Banadir, kuwaa oo kala ah 36 Lab ah iyo 26 Dhedig ah, halka ay u geeriyodeen 2 qof.
Wasaaradda ayaa Tirada Guud ee Laga Helay xanuunkan ku sheegtay 5,075, Tirada Guud ee Bogsatay waa 3,733.
Halka Dhimashada Guudna ay tahay 146. Wasaaradda ayaa ugu danbeeyn digniin caafimaad u dirtay dhamaan Ummadda Soomaaliyeed si ay ugu digtonadaan halista xanuunkan oo markale soo laba kacleeyay.